အား င ယ် - စို င်းထီးဆို င် #262249 | Featuring
Home › Music › အား င ယ် - စို င်းထီးဆို င်
အား င ယ် - စို င်းထီးဆို င်
Published at July 11, 2015
by Ko Kyaw OoDuration: 04:10
Downloading အား င ယ် - စို င်းထီးဆို င် mp3 on this site is just for review purpose. If you love the song, please support the artists by buying the original CD/Cassette or buying the song from iTunes.
အား င ယ်
စို င်းထီးဆို င်
ဘာမှ အ င် အား ကြီးလှ တ ယ် မ ထ င် ရ ပဲ
ကို င် ကာလ က် တွဲ ရ တု န်းကတော့ တ က ယ် အား ရှိ ရ င် မှာေ ပါ က် ဖွား လာတဲ့ သံယောဇ ဉ် ဆို တဲ့ အ သိ ကူ ညီ ကာေ ဖးမ သ လားတော့ ကို ယ် အ ခု မှ ဆ န်းစ စ်နေ မိ ငို ယို ကာတ မ်းတရော့ သ လား သူလေးခ မျာအ ခုတွေ့ အ ခုပျောက် သွား တ တ် တဲ့ လူ တ စ်ယောက် ကို အ ပြ န် အ လှ န် ထ င် ဟ တ် လာပြီးဤ လူ့ဘောင်
ချ စ် ခြ င်းတ ရား ထို လူ မှာတုံ့နှေးတဲ့ခြေ ဆ က် လှ မ်းရ င်းဝ မ်းန ည်းသ လို ကြီးအား င ယ် အား င ယ် မ င်းေ လးနဲ့ဝေးတဲ့ အ ခါ အား င ယ် အား င ယ် အား င ယ် မ င်းေ လးနဲ့ဝေးတဲ့ အ ခါ အား င ယ် အား င ယ် အား င ယ် မ င်းေ လးနဲ့ဝေးတဲ့ အ ခါ အ ရ မ်းကို လွ မ်းတ ယ် အ ရ မ်းကိုဆွေးတ ယ် (ဆွေးတ ယ် ) မ င်းေ လးနဲ့ဝေးတဲ့ အ ခါ များ ရ ယ် တ စ် ဖ န် ပြ န် ပြီးေ တွ့ ကြတော့လေ တ က ယ် ဝ မ်းသာတ စ် ခါ ပြ န် ပြီးေ တာ့
ေ ပျာက် မှာကို စိုးလှ ရ င် ခွ င် မှာဝှ က် ကာေ လ ထွ က် မ သွားအောင် ဖ က် ထား မှ ဒါတောင် မှ သ တိ လ က် လွ တ် တဲ့ အ ခါ များ ကျ ဆုံးသွား မှာအ သိ
Watch video on Youtube: အား င ယ် - စို င်းထီးဆို င်
Search another results: အား င ယ် - စို င်းထီးဆို င်
Post related to အား င ယ် - စို င်းထီးဆို င်:
[03:04] မိုးချ စ် သူ - စို င်းထီးဆို င် ၊ မီ မီ ဝ င်းေ ဖBy Ko Kyaw Ooမိုးချ စ် သူ
စို င်းထီးဆ ...
[04:03] တုံ့ ပြ န် ဖို့ မ လို ဘူးလား - စို င်းထီးဆို င်By Ko Kyaw Ooတုံ့ ပြ န် ဖို့ မ လို ဘူးလ � ...
[05:16] သ ဒ္ဒါ - ဖိုးချိုBy Ko Kyaw Ooသ ဒ္ဒါ - ဖိုးချို
သ ဒ္ဒါ ရ ယ် � ...
[03:40] ပ န်းချ စ် သူ - ခ င်မောင် တိုး၊ မီ မီ ဝ င်းေ ဖBy Ko Kyaw Ooပ န်းချ စ် သူ - ကိုမောင်ေ...
[04:26] အမေ တ စ် ခု သား တ စ် ခု - ကို သ က် မှူး၊ ထူးအိ မ် သ င်By Ko Kyaw Oo鄧麗君 - 難忘初戀的情人